Kambodza: Hiverina Hanao Politika Ny Printsy Ranariddh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2018 4:21 GMT
Nampanantena fa havitrika indray amin'ny politika ny Printsin'i Kambodza, Norodom Ranariddh, izay Praiministra teo aloha sady mpitarika ny antoko mpandala ny mpanjaka tao amin'ny firenena. Niala tao amin'ny firenena izy roa taona lasa izay rehefa nizarazara ny antokony sy taorian'ny fiampangana azy ho nanodinkodim-bola tamin'ny fotoana tsy nahateo azy. Manombana ny fiantraikan'ny fanambaràn'ny Printsy Ranariddh eo amin'ny politika Kambodziana ireo mpisera aterineto sy ireo manampahaizana amin'ny politika.
Niala tamin'ny politika tamin'ny taona 2008, nahagaga ny rehetra tao Kambodza ny Printsy Ranariddh rehefa nanambara vao haingana fa hiverina hanao politika izy mba hanamafisana ny hetsika mandala ny fitondra-mpanjaka. Niresaka tao amin'ny faritanin'i Kampong Cham tamin'ny voalohandohan'ny volana teo anoloan'ny mpanohana 500 teo ho eo, nanoritra izy fa ho valin'ny fanangonan-tsonia fangatahana azy hiverina amin'ny fitarihana ao Kambodza izao fiverenany izao. Manazava bebe kokoa izy ao amin'ny Phnom Penh Post:
“Manomana ny tenako aho hitarika ny Antoko Noradom Ranariddh, … Ny fanaovana politika dia mitovy amin'ny fiakinandoha amin'ny zavamahadomelina, saingy ny tena zava-dehibe dia ny fisian'ny fanangonan-tsonia maro manasa ahy hitarika ny Antoko Norodom Ranariddh.”
Ao amin'io lahatsoratra io ihany, nanamafy ny fomba fijeriny elatra afovoany ny printsy fa sady tsy manohana izy no tsy manakiana ny governemanta. Amin'izany fomba fijery izany, manantena ny Printsy fa hiaraka amin'ny vondrona royalista sy izay antoko hafa vonona tahaka ny Antokon'ny Zon'olombelona. Na dia izany aza, sarotra ny manatontosa ity drafitra ara-politika ity satria misy ny fandavàna sy ny fifandirana tsy voavaha eo amin'ireo vondrona samihafa. Misy ihany koa ny fanontaniana raha miara-dalana amin'ny demaokraty izy na komonista.
Naneho hevitra mikasika ny fiverenan'ny printsy eo amin'ny politika, nampitandrina ny praiminisitra Hun Sen fa hampifandray ny fanjakam-panjaka amin'ny governemanta izany ary mitaky ny fametraham-pialan'ny printsy amin'ny maha-mpanolotsainan'ny mpanjaka azy, dia ny rahalahiny Norodom Sihamoni izany. Manazava ny antony tokony hialàn'ny printsy amin'ny maha-mpanolotsain'ny mpanjaka: i Hun Sen
“Raha te hanao politika ianao dia tsy maintsy miala amin'ny Filankevitra Faratampony amin'ny maha-mpanolotsain'ny Mpanjaka, raha tsy izany, lasa mitongilana eo amin'ny resaka politika intsony ny mpanjaka. Ho ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra ny anaran'ny Mpanjaka, milaza fa rahalahin'ny mpanjaka aho, zanaky ny mpanjaka teo aloha aho, ary hampifandray ny Mpanjaka amin'ny politika izany. “
Mety efa tsinjo mialoha izany fihetsika izany, ka izany no antony nanambaran'ny printsy nandritra ny fivoriana tao amin'ny faritanin'i Kompong Cham fa tsy natao hiteraka ady amin'ny Praiminisitra ny fiverenany amin'ny politika. Taorian'ny nanoratan'i Norodom Sihanouk, Rain'ny Mpanjaka tao amin'ny tranonkalany mba hanehoana ny fanohanany feno an'i Hun Sen amin'ny maha mpitarika an'i Kambodza, nanazava ny Printsy Ranariddh fa misokatra amin'ny fananganana governemanta iraisana miaraka amin'ny mpitarika ny Antokom-bahoaka Kambodziana izy.
Notsikerain'ny the Son of the Khmer Empire (zanaky ny Ampira Khmer) izany fomba fijery izany, izay nanoratra fa tsy manana vina ara-politika mazava ny printsy ary mety ho tetika iray eo amin'ny printsy sy ny praiminisitra io tranga io.
Politisiana maty ampahany ny Printsy Ranarith izay tsy manana vina sy fanamby mba handresena an'i Hun Sen mba hiarovana ny firenena sy ny vahoakan'i Kambodza, saingy manao politika ho amin'ny fahavelomany fotsiny izy.
Mety ho tetika ara-politika napetrak'i Hun Sen izany l satria manahy mikasika ny tanjaky ny Antoko Rainsy Samy (SRP) izy. Hatramin'izao, mbola mieritreritra i Hun Sen fa mbola azo ampiasaina ihany i Ranarith mba hampizarazara ny herin'ny ankamaroan'ny Kambodziana izay tsy mpomba ny Antokom-bahoaka Kambodziana. Ny tena zava-dehibe dia mety hiaraka amin'i Ranarith i Kem Sokha ary mety hanamafy ity hery vaovao ity izany ary azo antoka fa hamparefo ny antoko faharoa lehibe indrindra – SRP. Rehefa tratra izany dia hitarika an'i Kambodza amin'ny sitrapony i Hun Sen.
Raha nahasarika ny sain'ireo antoko politika malaza sy fampahalalam-baovao nentim-paharazana ny fiverenan'ny printsy, dia toa tsy nisy ny fanehoan-kevitra goavana avy amin'ny mpiserasera ao an-toerana izay matetika mifanakalo hevitra sy vaovao amin'ny alalan'ny fitaovan'ny tambajotra sosialy amin'ny aterineto toy ny bilaogy, facebook ary twitter. Miharihary fa ny Ivotoerana Kambojiana misahana ny Zon'olombelona irery ihany, fikambanana tsy miankina iray ao an-toerana no nanatontosa fitsapa-kevi-bahoaka momba ny olana tamin'ny alàlan'ny facebook izay nahazo mpamaly latsaky ny 10 hatramin'izao:
Zavatra tsara ho an'ny politika Kambodziana ve ny fiverenan'i Norodom Ranaridh?
Mety hamaly amin'ny ampahany ny fanontaniana izany raha hisy fiantraikany goavana eo amin'ny politika Kambodziana ny fiverenan'ny printsy.